Aphid | October 2019
Ugu Weyn Ee Aphid
Kalanchoe: korriinka iyo daryeelka guriga
Hoyga, kaliya dhowr nooc oo Kalanchoe ah ayaa la koray: Cirrus, Blosseld, Ubaxa kaliya iyo Daygremont. Laakiin mid kasta oo ka mid ah noocyadaas koraan ee gurigaaga, daryeelka dhirtu waxay noqon doontaa isku mid. Xaaladaha dayactirka ee Kalanchoe Wakiilada "guriga" Kalanchoe waxay ka tirsan tahay qoyska Crassulaceae, dhammaantood waxay ka yimaadaan dhiriryada, sidaas darteed aan qabyo ahayn, waxay muddo dheer ku fidi kartaa qoyaan iyo deegaan qoyan.
Cayayaanka Hydrangea iyo hababka looga hortagayo
Hydrangeas waa geedo cajiib ah oo qurux badan. Wixii noocyo kala duwan ee noocyada inflorescence, ubax ballaaran, palette ballaaran ee ubax, caleemo waaweyn oo caleemo, iyo sidoo kale unpretentiousness ee hydrangeas waxaa lagu qiimeeyaa beerta madaxtooyada. Hydrangeas waxay si gaar ah u jecelyihiin xilliga deyrta, sababtoo ah waxay ahayd markaa waxaad arki kartaa madaxyada abuurka, burooyinkeeda iyo caleemaha midabada kala duwan ee midabkan ku saabsan geedkan quruxda badan ee isla wakhtigaas.
Shiinaha oo kordhay - daryeelka guriga
Hibiscus, ama Chinese Rose, waxaa loo tixgeliyaa dadka ugu caansan ee qoyska Hibiscus qoyska Malvaceae. Guud ahaan, waxaa jira qiyaastii 200 nooc oo hibiscus ah, laakiin waa gebi ahaan sicirka Shiinaha kaas oo noqday mid caan ku ah floriculture. Ma taqaanaa? Dalka Malaysia, Shiinaha ayaa kor u kacay (Malaysiya waxay u yeeraysaa Bungaraya) waa mid ka mid ah calaamadaha dalka, taas oo lagu muujiyay lacagta.
Talooyin ku saabsan xannaaneynta guriga euphorbia
Xaaladda furan, marar dhif ah ayay bixinaysaa dareenka, laakiin qaybta gudaha ah waxay inta badan xiisaysaa dad badan. Nidaamka wanaagsan ee sii kordhaya warshadani waa mid sahlan marka loo fiiriyo xannaanada, taas oo ka dhigaysa xulasho wanaagsan oo kuwa aan haysan fursad ay waqti badan ku qaataan daaqsinta guriga.
Sida loo takhaluso aphids on-aadanku ee beerta, sharaxaad ka mid ah hababka ugu fiican ee halganka
Mid ka mid ah dhirta ugu quruxda badan, qurux badan oo la jecel yahay ee bannaanka - Rose, ayaa sidoo kale ku xiran onslaught ee cudurada iyo cayayaanka. Ubaxkan jilicsan wuxuu lumin karaa muuqaalkiisa iyadoo la jabinayo aphids. Cayayaanka yar yar, cayayaanka jilicsan ayaa mararka qaar noqdaan cadow ku dhasha beeraleyda, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida looga hortago cayayaanka cayayaan-cayayaanka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Aphid 2019